ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများကို Matthias Brand နှင့်သူ၏အဖွဲ့ - Your Brain On Porn မှအာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ
ဿိအမှတ်တံဆိပ်ဌာန၏အထွေထွေစိတ်ပညာ၏ဦးခေါင်းသည်: Duisburg-အက်ဆင်း (တက္ကသိုလ်သိမှတ်ခံစားမှုအမှတ်တံဆိပ်၏သုတေသီအဖွဲ့) ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအမှတ်တံဆိပ်နဲ့သူ့အဖွဲ့ထုတ်ဝေဘူးသော, ထိုအာရုံကြော porn အသုံးပြုသူများကိုအပေါ်လေ့လာမှုများ, နှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု / စွဲလမ်းအပေါ်စာပေ / မှတ်ချက်အပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနေသောခေါင်းစဉ်:
1) အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအကဲခတ်: အင်တာနက်ကိုလိင်ဆိုဒ်များအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းများအတွက်လိင်စိတ်နိုးထ Ratings အဖွဲ့နှင့်စိတ်ဓာတ်-စိတ်ရောဂါရောဂါလက္ခဏာများ၏အခန်းက္ပ (ကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al ။, 2011) - [ သာ. ကြီးမြတ်မတရားသော / ထိခိုက်စေဆင်းရဲတဲ့အလုပ်အမှုဆောင် function ကို] - တစ်ကောက်နုတ်ချက်:
ရလဒ်များအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဆက်စပ်နေ့စဉ်အသက်တာ၌ Self-အစီရင်ခံပြဿနာများသည်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထ ratings, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြင်းထန်မှုများကခန့်မှန်းခြင်း, နေ့စဉ်အသက်တာ၌အင်တာနက်ကိုလိင်က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်ဖြစ်ခြင်းလာသောအခါလိင် applications များ၏နံပါတ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်ကြောင်းညွှန်ပြ အင်တာနက်ကိုလိင်က်ဘ်ဆိုက်များ (တစ်နေ့လျှင်မိနစ်) ရက်နေ့တွင်သုံးစွဲအချိန်ကိုသိသိသာသာ IATsex ရမှတ်အတွက်ကှဲလှဲ၏ရှင်းပြချက်ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေမပြုခဲ့နေစဉ်။ ကျနော်တို့အလားအလာအလွန်အကျွံကျဘာနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအဘို့အဖော်ပြထားမြား၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှပံ့ပိုးသိမြင်မှုနှင့်ဦးနှောက်ယန္တရားအကြားအချို့မျဉ်းပြိုင်ကြည့်ပါ။
2) အလုပ်အဖွဲ့မှတ်ဉာဏ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူညစ်ညမ်းရုပ်ပုံထုတ်ယူခြင်း်ရောက်စွက်ဖက် (Laier et al ။, 2013) - [ သာ. ကြီးမြတ်မတရားသော / ထိခိုက်စေဆင်းရဲတဲ့အလုပ်အမှုဆောင် function ကို] - တစ်ကောက်နုတ်ချက်:
တချို့ကတစ်ဦးချင်းစီထိုကဲ့သို့သောအိပ်ပျော်ခြင်းပျောက်ဆုံးနှင့်အပျက်သဘောဘဝအကျိုးဆက်များနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောချိန်း, မေ့လျော့အဖြစ်, အင်တာနက်လိင်ဆက်ဆံမှုစဉ်နှင့်အပြီးပြဿနာများသတင်းပို့ပါ။ အလားအလာပြဿနာများကိုဤမျိုးစုံမှဦးဆောင်တစ်ခုမှာယန္တရားအင်တာနက်ကိုလိင်စဉ်အတွင်းလိင်စိတ်နိုးထသက်ဆိုင်ရာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ထို့ကြောင့်မဲ့ဖြစ်စေသည်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့လျစ်လျူရှုမှုအလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ် (WM) စွမ်းရည်နှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်စေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။ ရလဒ်များသုံးယောက်ကျန်ရှိရုပ်ပုံအခြေအနေများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဆိုပါ 4-ကျောတာဝန်များ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအခြေအနေပိုမိုဆိုးရွား WM စွမ်းဆောင်ရည်ဖော်ပြခဲ့တယ်။ စွဲ-related တွေကိုအားဖြင့် WM ်ရောက်စွက်ဖက်ကောင်းစွာဥစ္စာမှီခိုရာမှလူသိများသည်ဖြစ်သောကြောင့်တွေ့ရှိချက်အင်တာနက်စွဲမှလေးစားမှုနှင့်အတူဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
3) ဆုံးဖြတ်ချက်-Making သဲသဲကွဲကွဲမရှိသောလက်အောက်တွင်နှင့်အတူလိင်ရုပ်ပုံထုတ်ယူခြင်း်ရောက်စွက်ဖက် (Laier et al။ , 2013) - [ သာ. ကြီးမြတ်မတရားသော / ထိခိုက်စေဆင်းရဲတဲ့အလုပ်အမှုဆောင် function ကို] - တစ်ကောက်နုတ်ချက်:
4) ဘာစွဲ: အတွေ့အကြုံလိင်စိတ်နိုးထညစ်ညမ်းနှင့်မစစ်မှန်သောဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်စောင့်ကြည့်သည့်အခါ (ထိုကွာခြားချက်စေသည်Laier et al။ , 2013) - [ သာ. ကြီးမြတ်မတရားသော / ထိခိုက်စေဆင်းရဲတဲ့အလုပ်အမှုဆောင် function ကို] - တစ်ကောက်နုတ်ချက်:
ရလဒ်ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းတွေကိုမှလိင်စိတ်နိုးထနှင့်တဏှာ၏အညွှန်းကိန်းကိုပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုမှာကျဘာစွဲဆီသို့ဦးတည်လိုတဲ့သဘောထားကိုခန့်မှန်းဖော်ပြသည်။ ထို့အပွငျကပြဿနာဘာအသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်း cue တင်ဆက်မှုကနေရရှိလာတဲ့ သာ. ကြီးမြတ်လိင်စိတ်နိုးထနှင့်တဏှာတုံ့ပြန်မှုသတင်းပို့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုတွေမှာနံပါတ်နှင့်စစ်မှန်သောဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်တွေနဲ့အရည်အသွေးကျဘာစွဲမှဆက်စပ်မခံခဲ့ရပါ။ ရလဒ်ယန္တရားများသင်ယူခြင်း, အားဖြည့်ယူဆသောဆန္ဒပြည့်အယူအဆ, ကိုထောကျပံ့များနှင့်ကျဘာစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်စွဲလမ်း။ ညံ့ဖျင်းသောသို့မဟုတ်ချည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစစ်အမှန်ဘဝအဆက်အသွယ်လုံလုံလောက်လောက်ကျဘာစွဲရှင်းပြလို့မရပါဘူး။
5) အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏လိင်ကွဲအမျိုးသမီးသည်အသုံးပြုသူများအတွက်ဘာစွဲ (ဆန္ဒပြည့်အယူအဆအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါတယ်Laier et al။ , 2014) - [ သာ. ကြီးမြတ်မတရားသော / ာင်း] - တစ်ကောက်နုတ်ချက်:
ကျနော်တို့ 51 အမျိုးသမီး IPU နှင့် 51 အမျိုးသမီး Non-အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည် (NIPU) ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ မေးခွန်းအသုံးပြုခြင်း, ငါတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်, ယေဘုယျပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများ၏ပြင်းထန်မှုများအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်ဘာစွဲ၏ပြင်းထန်မှုအဖြစ် propensity အကဲဖြတ်။ ထို့အပြင် 100 ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအဖြစ်တဏှာ၏ညွှန်းကိန်းတစ်ခုပုဂ္ဂလဒိဋ္ arousal အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အပါအဝင်စမ်းသပ်ပါရာဒိုင်း, ကောက်ယူခဲ့သည်။ ရလဒ်များပိုပြီး arousal အဖြစ် IPU rated ကြောင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုညွှန်ပြခြင်းနှင့် NIPU နဲ့နှိုင်းယှဉ်မှုကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတင်ဆက်မှုပိုမိုတဏှာကဖော်ပြခဲ့သည်။ ထိုမှတပါး, တဏှာ, ပုံလိင်စိတ်နိုးထ rating, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်, ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများ၏ပြင်းထန်မှုမှ sensitivity ကို IPU အတွက်ဘာစွဲဆီသို့သဘောထားတွေကိုခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်များ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်တွေနဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုများနှင့်အပြန်အလှန်ကျဘာအသုံးပြုမှုအရေအတွက်ကျဘာစွဲနှင့်ဆက်စပ်မခံခဲ့ရပါ။ ဤရလဒ်သည်ယခင်လေ့လာမှုများအတွက်လိင်ကွဲအထီးအဘို့အအစီရင်ခံသူတို့နှင့်အတူလိုင်း၌ရှိကြ၏။ လိင်စိတ်နိုးထ၏အားဖြည့်သဘာဝနှင့် ပတ်သက်. လေ့လာတွေ့ရှိချက်, သင်ယူမှုနှင့် IPU အတွက်ဘာစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် cue reactivity ကိုနှင့်တဏှာ၏အခန်းကဏ္ဍကို၏ယန္တရားများဆှေးနှေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
6) တစ်ဦးသိမှုအပြုအမူကြည့်ရန် မှစ. ကျဘာစွဲမှပံ့ပိုးအချက်များအပေါ်ပင်ကိုယ်မူလအထောက်အထားများနှင့်သီအိုရီကိုစဉ်းစား (Laier et al ။, 2014) - [ သာ. ကြီးမြတ်မတရားသော / ာင်း] - တစ်ကောက်နုတ်ချက်:
တစ်ဦးဖြစ်ရပ်ဆန်း၏သဘောသဘာဝကိုမကြာခဏကျဘာစွဲ (CA) လို့ခေါ်တဲ့နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး၎င်း၏ယန္တရားများဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။ ယခင်အလုပ်အပြုသဘောအားကောင်းနှင့် cue-reactivity ကို, CA ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အဓိကယန္တရားဖြစ်စဉ်းစားနေစဉ်အချို့သောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း,, CA မှအားနည်းချက်ဖြစ်အံ့သောငှါအကြံပြုထားသည်။ ဤလေ့လာမှု၌, 155 လိင်ကွဲအထီး 100 ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ rated နှင့်လိင်စိတ်နိုးထသူတို့ရဲ့တိုးညွှန်ပြ။ ထို့အပွငျ, CA, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ sensitivity ကိုများနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်လိင်၏အလုပ်မဖြစ်အသုံးပြုမှုကိုဦးတည်လိုတဲ့သဘောထားကိုအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ အဲဒီမှာ, CA မှအားနည်းချက်၏အကြောင်းရင်းများဖြစ်ကြောင်းနှင့် CA. ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနဲ့အလုပ်မဖြစ်ဖြေရှင်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုအဘို့သက်သေသာဓကများကိုလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုပြသ
7) ဘာစွဲ (ကုန်အမှတ်တံဆိပ် & Laier, 2015). ကောက်နှုတ်ချက်:
8) အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏ neuroscience: တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် Update ကို (et al Love ။, 2015). အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲအပေါ်အထူးအာရုံစိုက်နှင့်အတူအင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းခွဲအမျိုးအစားများ, နှင့် ပတ်သက်. neuroscience စာပေ၏တစ်ဦးကနှံ့နှံ့စပ်စပ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကဦးဆောင်အဖွဲ့များအားဖြင့်နှစ်ခုမကြာသေးမီဆိုးသွမ်း EEG လေ့လာမှုများ critiques နီကိုးလ် Prause (သူကိုမဟုတ်မမှန်တွေ့ရှိချက် porn စွဲအပေါ်သံသယကိုနှင်ထုတ်ဆိုပါတယ်) ။ ကောက်နှုတ်ချက်:
9) သီးခြားအင်တာနက်အသုံးပြုမှု Disorders ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ကို Maintenance နှင့်စပ်လျဉ်းစိတ်ဓာတ်နှင့် Neurobiological ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေါင်းစပ်: ပုဂ္ဂိုလ်-အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု-သိမှတ်ခံစားမှု-execution model တစ်ခု Interaction (ကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al ။, 2016)။ "အင်တာနက်ညစ်ညမ်း-ကြည့်ရှုရောဂါ" အပါအဝင်သီးခြားအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမမှန်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအခြေခံသည့်ယန္တယား၏တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ အဆိုပါစာရေးဆရာညစ်ညမ်းစွဲ (နှင့်ကျဘာစွဲ) အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမမှန်အဖြစ်ခွဲခြားခြင်းနှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေအဖြစ်ဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်အောက်မှာအခြားအမူအကျင့်စွဲလမ်းနှင့်အတူထားရှိစေခြင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ကောက်နှုတ်ချက်:
10) Prefrontal ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်း: neuropsychological နှင့် neuroimaging တွေ့ရှိချက်တစ်ခုသီအိုရီမော်ဒယ်နှင့်ပြန်လည်သုံးသပ် (ကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al။ , 2015) - [အလုပ်မဖြစ် prefrontal ဆားကစ် / ဆင်းရဲတဲ့အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုအရေးကြီးတဲ့] - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
ဤအချက်နှင့်အညီအလုပ်လုပ်သည့် neuroimaging နှင့်အခြား neuropsychological လေ့လာမှုများမှရလဒ်များသည် cue-reactivity, craving နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းသည်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုကိုနားလည်ရန်အတွက်အရေးကြီးသောအယူအဆဖြစ်သည်။ အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုလျှော့ချအပေါ်တွေ့ရှိချက်ထိုကဲ့သို့သောရောဂါဗေဒလောင်းကစားကဲ့သို့သောအခြားအပြုအမူစွဲနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကအစပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုအတွက်တွေ့ရှိချက်နှင့်အတူအများအပြားတူညီလည်းရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖြစ်ရပ်ဆန်းတစ်ခုစွဲအဖြစ်ခွဲခြား၏အလေးပေး။ ထို့အပြင်လက်ရှိလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုသုတေသနအနေဖြင့်တွေ့ရှိချက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ကြပြီး cybersex စွဲနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုသို့မဟုတ်အခြားအပြုအမူစွဲအကြားနှိုင်းယှဉ်အလေးပေး။
11) ဘာစွဲအတွက်သွယ်ဝိုက်အသင်းအဖွဲ့များ: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်အတူတစ်သွယ်ဝိုက်အစည်းအရုံးစမ်းသပ်ခြင်း၏ adapter (Snagkowski et al။ , 2015) - [ သာ. ကြီးမြတ်မတရားသော / ာင်း] - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
မကြာသေးမီကလေ့လာမှုများကဆိုက်ဘာအဆက်ပြတ်မှုနှင့်ပစ္စည်းမှီခိုမှုအကြားတူညီမှုကိုပြသပြီး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုမှုအရသွယ်ဝိုက်သောအသင်းအဖွဲ့များသည်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ to မှပါ ၀ င်သည်။ ဤစမ်းသပ်လေ့လာမှုတွင်လိင်ကွဲလိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသား ၁၂၈ ဦး သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ပြုပြင်ထားသောသွယ်ဝိုက်အသင်းအဖွဲ့စစ်ဆေးမှု (IAT; Greenwald, McGhee, & Schwartz, 128) ကိုပြီးစီးခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ပြproblemနာရှိသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၊ လိင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုအာရုံပြုခြင်း၊ ရလဒ်များအရအပြာအပြာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များအကြားအပြုသဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုများနှင့်ဆိုက်ဘာဆက်ဆံမှုစွဲလမ်းမှု၊ ပြaticနာရှိသည့်လိင်အပြုအမူများ၊ ထို့အပြင်တစ် ဦး အလယ်အလတ်ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမြင့်မားပုဂ္ဂလဒိive္တဏှာအစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့်အပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုနှင့်အတူအပြာရုပ်ပုံ၏အပြုသဘောသွယ်ဝိုက်အသင်းအဖွဲ့များပြသခဲ့သည်တစ် ဦး ချင်းစီ, အထူးသဖြင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးစွဲဆီသို့ ဦး တည်တော်မှာကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ တွေ့ရှိချက်များအရအပြာရုပ်ပုံများနှင့်အပြုသဘောဆောင်သောသွယ်ဝိုက်သောပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးများသည်ဆိုက်ဘာဆက်ဆံမှုစွဲလမ်းမှုကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအခန်းကဏ္suggestကိုဖော်ပြသည်။ ထို့အပြင်လက်ရှိလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုသုတေသနအနေဖြင့်တွေ့ရှိချက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ကြပြီး cybersex စွဲနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုသို့မဟုတ်အခြားအပြုအမူစွဲအကြားနှိုင်းယှဉ်အလေးပေး။
12) ပုံမှန်ဘာအသုံးပြုသူ့ Analog နမူနာကနေရလဒ်တွေကို (ဘာစွဲ၏ရောဂါလက္ခဏာများနှစ်ဦးစလုံးချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်ရှောင်ရှားညစ်ညမ်းလှုံ့ဆော်မှုချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်et al Snagkowski ။, 2015) - [ သာ. ကြီးမြတ်မတရားသော / ာင်း] - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
တချို့ကချဉ်းကပ်မှုချဉ်းကပ်မှု / ရှောင်ရှားလိုတဲ့သဘောထားကိုအလွန်အရေးပါယန္တရားများနေသောများအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုဖို့တူညီဆီသို့ညွှန်ပြ။ အတော်ကြာသုတေသီများတစ်ခုစွဲ-related ဆုံးဖြတ်ချက်ခွအေနကေိုအတွင်းမှာတစ်ဦးချင်းစီစွဲလမ်း-related လှုံ့ဆော်မှုချဉ်းကပ်သို့မဟုတ်ရှောင်ရှားရန်လိုတဲ့သဘောထားကိုပြခြင်းငှါလည်းကောင်းကြောင်းစောဒကတက်ကြသည်။ လက်ရှိလေ့လာမှုမှာ 123 လိင်ကွဲအထီးတစ်ခုချဉ်းကပ်-ရှောင်ရှား-Task ကို (AAT ပြီးစီးခဲ့; Rinck နှင့် Becker က, 2007) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်အတူအချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ AAT သင်တန်းသားများကိုစဉ်အတွင်းဖြစ်စေကွာညစ်ညမ်းလှုံ့ဆော်မှုတွန်းတစ်ခုသို့မဟုတ် Joystick နှင့်ကိုယ်ဆီသို့သူတို့ကိုဆွဲထုတ်ခဲ့ရသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်, ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ကျဘာစွဲဆီသို့သဘောထားတွေမေးခွန်းနှင့်အတူအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်ဆီသို့ sensitivity ။
ရလဒ်များကျဘာစွဲဆီသို့သဘောထားတွေနဲ့အတူလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းချဉ်းကပ်ပုံသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းလှုံ့ဆော်မှုကိုရှောင်ကြဉ်ဖြစ်စေရန်တော်မှာကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ထို့အပြင်တည်းဖြတ်ဆုတ်ယုတ်မြင့်မားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားနှင့်မြင့်မားသောချဉ်းကပ်မှု / ရှောင်ရှားလိုတဲ့သဘောထားကိုပြသသူကိုပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ, ကျဘာစွဲမြင့်မားရောဂါလက္ခဏာတွေကဖော်ပြခဲ့သည်ကြောင်းထင်ရှားလေ့လာဆန်းစစ်။ ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုဖို့ analog, ရလဒ်များကိုနှစ်ဦးစလုံးချဉ်းကပ်မှုနှင့်ရှောင်ရှားလိုတဲ့သဘောထားကိုကျဘာစွဲနေတဲ့အခန်းကဏ္ဍစခွေငျးငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆီသို့ sensitivity ကိုအတူတစ်ဦးအပြန်အလှန်ကျဘာအသုံးပြုမှုကြောင့်နေ့စဉ်အသက်တာ၌ပုဂ္ဂလဒိဋ္တိုင်ကြားချက်၏ပြင်းထန်မှုတခုတခုအပေါ်မှာစုဆောင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက်ကျဘာစွဲခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုအကြားတူညီဘို့နောက်ထပ်ပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားသည်။ ထိုသို့သောတူညီ cybersex- နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-related တွေကိုတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်အာရုံကြောအပြောင်းအလဲနဲ့မှဒါနဲ့နိုငျသညျ။
13) ညစ်ညမ်းအတူ flyer တဲ့? တစ်ဦး multitasking ကိုအခြေအနေမှာဘာတွေကိုသုံးရင်သို့မဟုတ်လစ်လျူရှုကျဘာစွဲလက္ခဏာတွေမှဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ် (Schiebener et al ။, 2015) - [မတရားသော / ထိခိုက်စေဆင်းရဲတဲ့အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှု သာ. ကြီးမြတ်] - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
တချို့ကတစ်ဦးချင်းစီပုဂ္ဂလိကဘဝသို့မဟုတ်အလုပ်အတွက်ပြင်းထန်အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များမှဦးဆောင်သည့်စွဲလမ်းထုံးစံ၌ထိုကဲ့သို့သောညစ်ညမ်းပစ္စည်းအဖြစ်ကျဘာအကြောင်းအရာများကို, စားသုံးကြသည်။ အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များမှဦးဆောင်တစ်ခုမှာယန္တရားကျဘာအသုံးပြုမှုနှင့်အခြားတာဝန်များကိုနှင့်ဘဝ၏တာဝန်ဝတ္တရားများအကြားရည်မှန်းချက်-oriented switching နားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုအပ်သောဖြစ်မည်အကြောင်းသိမှတ်ခံစားမှုနှင့်အပြုအမူကျော်အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုလျှော့ချနိုင်ပါသည်။ ဒီရှုထောင့်ကိုဖြေရှင်းရန်, ငါတို့နှစ်စုံနဲ့အလုပ်အမှုဆောင် multitasking ကိုပါရာဒိုင်းနှင့်အတူ 104 အထီးသင်တန်းသားများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး: တစ်ခုမှာထားပုဂ္ဂိုလ်များ၏ရုပ်ပုံများပါဝင်သည်, အခြား set ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများပါဝင်သည်။ နှစ်ဦးစလုံးအစုံအတွက်ဓာတ်ပုံများကိုအချို့သောသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီခွဲခြားခံရဖို့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါရှင်းလင်းပြတ်သားစွာရည်မှန်းချက်မြှတထုံးစံအတွက်အစုံနှင့်ခွဲခြားတာဝန်များကိုအကြား switching အသုံးပြုပုံပမာဏတူညီဖို့အားလုံးကိုခွဲခြားတာဝန်များကိုအလုပ်လုပ်ဖို့ပဲ။
ငါတို့သည်ဤ multitasking ကိုပါရာဒိုင်းအတွက်လျော့နည်းမျှမျှတတစွမ်းဆောင်ရည်ကျဘာစွဲဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့မြင့်မားတဲ့စိတ်သဘောထားနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ မကြာခဏသုံးရင်ဒါမှမဟုတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများပေါ်အလုပ်လုပ်လျစ်လျူရှုဖြစ်စေဒီစိတ်သဘောထားနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များ။ ရလဒ်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခံရသောအခါ, multitasking ကို performance ကိုကျော်အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုလျှော့ချကြောင်းညွှန်ပြ, အလုပ်မဖြစ်အပြုအမူတွေနဲ့ဘာစွဲကနေရရှိလာတဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုအထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မည်။ စွဲလမ်း၏စိတ်ခွန်အားနိုးမော်ဒယ်များထဲမှာဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်းသို့သော်ကျဘာစွဲဆီသို့ဦးတည်လိုတဲ့သဘောထားကိုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီသည်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းရှောင်ရှားရန်သို့မဟုတ်ချဉ်းကပ်ဖို့အကွံဖြစ်စေရှိသည်ဖို့ပုံရသည်။
14) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်အလုပ်မဖြစ်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ငိုကြွေးနေသောကောင်ကလေးအထီးအတွက်ဘာစွဲ (ဆုံးဖြတ်ပါLaier et al ။, 2015) - [ သာ. ကြီးမြတ်မတရားသော / ာင်း] - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
မကြာသေးမီတွေ့ရှိချက်ကျဘာစွဲ (CA) ပြင်းထန်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှား၏ညွှန်းကိန်းများအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့သရုပ်ပြနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအားဖြင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်, CA ရောဂါလက္ခဏာတွေအကြားဆက်ဆံရေးကမကထပြုခဲ့ကြောင်းပါပြီ။ ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာလိင်တူဆက်ဆံသူယောက်ျားတစ်နမူနာ၌ဤဖျန်ဖြေခြင်းကိုစမ်းသပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ မေးခွန်း, CA, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလှုံ့ဆျောမှု, ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများနှင့်စစ်မှန်သောဘဝနှင့်အွန်လိုင်းအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုမှ sensitivity ကိုလက္ခဏာတွေအကဲဖြတ်။ ထိုမှတပါး, သင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများကြည့်ရှုအားပေးနှင့်ဗီဒီယိုတင်ဆက်မှုမီနှင့်အပြီးသူတို့ရဲ့လိင်စိတ်နိုးထညွှန်ပြ။ ရလဒ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ, နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများအားဖြင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း, လိင်စိတ်နိုးထနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှား၏, CA လက္ခဏာတွေနှင့်ညွှန်းကိန်းများအကြားခိုင်မာတဲ့ဆက်စပ်မှုပြသခဲ့သည်။ , CA အော့ဖ်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့အပတ်စဉ်ကျဘာအသုံးပြုမှုကိုအချိန်နှင့်ဆက်စပ်မခံခဲ့ရပါဘူး။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအားဖြင့်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့် CA. အကြားဆက်ဆံရေးကမကထပြုခဲ့ ရလဒ်ယခင်လေ့လာမှုများအတွက်လိင်ကွဲယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းမှုအတွက်အစီရင်ခံသူတို့နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ကြပြီးကြောင့်ကျဘာကိုအသုံးပြုခြင်းမှအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောအားဖြည့်များ၏အခန်းကဏ္ဍကိုမီးမောင်းထိုးပြရာ, CA ၏သီအိုရီယူဆချက်၏နောက်ခံဆန့်ကျင်ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
15) Ventral Striatum Activity ကိုအကဲခတ်လိုက်တဲ့အခါပိုမိုနှစ်သက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ (အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏ရောဂါလက္ခဏာများဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al။ , 2016) - [ သာ. ကြီးမြတ် cue reactivity ကို / ာင်း] - တစ်ဦးကဂျာမန် fMRI လေ့လာမှု။ #1 ရှာဖွေခြင်း: ဆုကြေးစင်တာလှုပ်ရှားမှု (ventral striatum) ဦးစားပေးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများများအတွက်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည်။ #2 ရှာဖွေခြင်း: အင်တာနက်ကိုလိင်စွဲရမှတ်ဆက်နွယ်နေကြောင်း Ventral striatum reactivity ကို။ နှစ်ဦးစလုံးတွေ့ရှိချက်ာင်းညွှန်ပြခြင်းနှင့်အတူ align စွဲမော်ဒယ်။ အဆိုပါစာရေးဆရာက "အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစွဲ၏ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောအခြေခံသည်အခြားစှဲဖို့နှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ " အဲဒီဖော်ပြတစ်ခုကောက်နုတ်ချက်:
အင်တာနက်စွဲတစ်ခုမှာအမျိုးအစားလည်းကျဘာသို့မဟုတ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲအဖြစ်ရည်ညွှန်းအလွန်အကျွံညစ်ညမ်းစားသုံးမှုဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းသားများကို Non-ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ / ခေါ်ဆောင်သွားပစ္စည်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုစောင့်ကြည့်သည့်အခါ Neuroimaging လေ့လာမှုများ ventral striatum လှုပ်ရှားမှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့အခု ventral striatum Non-နှစ်သက်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများဖို့နှင့်ဤဆနျ့ကငျြဘအတွက် ventral striatum လှုပ်ရှားမှုကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္လက္ခဏာတွေဆက်နွယ်နေကြောင်းသင့်ကြောင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုနှစ်သက်ညစ်ညမ်းတုံ့ပြန်သင့်ကြောင်းတွေးဆ။ ကျနော်တို့ဦးစားပေးနဲ့ Non-နှစ်သက်သောညစ်ညမ်းပစ္စည်းအပါအဝင်ပုံပါရာဒိုင်းနှင့်အတူ 19 လိင်ကွဲအထီးသင်တန်းသားများကိုလေ့လာခဲ့သည်။
ဦးစားပေးကဏ္ဍကနေရုပ်ပုံများကိုပိုမို arousal, လျော့နည်းမနှစ်မြို့ဖွယ်များနှင့်စံပြပိုမိုနီးကပ်စွာအဖြစ် rated ခဲ့ကြသည်။ Ventral striatum တုံ့ပြန်မှု Non-နှစ်သက်သောဓါတ်ပုံတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ဦးစားပေးအခွအေနေအဘို့အအားကောင်းခဲ့သည်။ ဒီမတူဘဲ Ventral striatum လှုပ်ရှားမှုကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲ၏ Self-အစီရင်ခံလက္ခဏာတွေဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါပုဂ္ဂလဒိဋ္လက္ခဏာပြင်းထန်မှုခန့်မှန်းအဖြစ်နောက်ဆုံးသောကာလ၌လည်းမှီခို variable ကိုနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲ, ယေဘုယျလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်, hypersexual အပြုအမူ, စိတ်ကျရောဂါ, လူ့ sensitivity ကိုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္ရောဂါလက္ခဏာတွေအဖြစ် ventral striatum တုံ့ပြန်မှုနဲ့ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက်သာသိသာခန့်မှန်းခဲ့သည် ။ ရလဒ် Subject ညစ်ညမ်းပစ္စည်းပိုမိုနှစ်သက်ဆက်စပ်အပြောင်းအလဲနဲ့ဆုလာဘ်မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ဆန္ဒပြည့်အတွက် ventral striatum များအတွက်အခန်းကဏ္ဍထောက်ခံပါတယ်။ ventral striatum အတွက်ဆုလာဘ်မျှော်လင့်များအတွက် mechanisms အချို့ဦးစားပေးများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုကိုကျော်သူတို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးဘို့မှာ-အန္တရာယ်များမှာအဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးအာရုံကြောရှင်းပြချက်ကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
16) ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်ဖွဲ့စည်းသင်ယူဘို့ပုဂ္ဂလဒိဋ္တဏှာ (ပုံမှန်ဘာအသုံးပြုသူများ၏နမူနာထဲမှာဘာစွဲဆီသို့သဘောထားတွေကိုခန့်မှန်းပြီးSnagkowski et al ။, 2016) - ယခင်ကြားနေပုံစံမျိုးစုံမှဒီအမူထူးခြားတဲ့လေ့လာမှုအေးစက်ဘာသာရပ်များ, တစ်ဦးညစ်ညမ်းပုံရိပ်၏အသွင်အပြင်ဟောကိန်းထုတ်ထားတဲ့ - [ သာ. ကြီးမြတ် cue reactivity ကို / sensitive ကအေးစက်တုံ့ပြန်မှုတိုးမြှင်] ။ ကောက်နှုတ်ချက်:
ဘာစွဲ၏အဖြေရှာတဲ့စံနှင့် ပတ်သက်. မျှသဘောတူညီမှုရှိပါသည်။ တချို့ကချဉ်းကပ်မှုဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှုအရေးပါသောယန္တရားဖြစ်သောများအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုမှတူညီ postulate ။ ဤလေ့လာမှု၌, 86 လိင်ကွဲအထီးကျဘာစွဲအတွက်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်အတူပြုပြင်ထားသောတူရိယာဆိုင်ရာလွှဲပြောင်း Task ကိုမှဟာ Standard Pavlovian ပြီးစီးခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ကြောင့်ကျဘာစွဲဆီသို့ဦးတည်ညစ်ညမ်းပုံနဲ့သဘောထားတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ပုဂ္ဂလဒိဋ္တဏှာအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ရလဒ်များဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှုများကတည်းဖြတ်, ဘာစွဲဆီသို့ဦးတည်လိုတဲ့သဘောထားကိုအပေါ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္တဏှာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပြသခဲ့သည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုနှင့်ကျဘာစွဲအကြားတူညီဘို့နောက်ထပ်ပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားပေးစဉ်ယေဘုယျအားဤတွေ့ရှိချက်များ, ဘာစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှု၏အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကိုဆီသို့ညွှန်ပြ။ အကျဉ်းချုပ်မှာတော့လက်ရှိလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှုကျဘာစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှအံ့သောငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ပုဂ္ဂလဒိဋ္တဏှာနှင့်ဖွဲ့စည်းသင်ယူမှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုပြသခဲ့ကြသည်ကတည်းကကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်ကျဘာစွဲခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုအကြားတူညီဘို့နောက်ထပ်သက်သေသာဓကသည်။
17) အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ပြီးနောက်စိတ်ဓါတ်များအပြောင်းအလဲများကို (အင်တာနက်ညစ်ညမ်း-ကြည့်ရောဂါ၏လက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်နေပါသည်Laier & အမှတ်တံဆိပ်, 2016) - [မတရားသော / sensitive ကလျော့နည်းအကြိုက် သာ. ကြီးမြတ်] - ကောက်နှုတ်ချက်:
လေ့လာမှု၏အဓိကရလာဒ်များမှာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဆိုင်ရာရောဂါ (IPD) နှင့်ပတ်သက်သောသဘောထားများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ကောင်းမွန်သော၊ နိုးကြား။ အေးဆေးတည်ငြိမ်ခြင်းနှင့်နေ့စဉ်ဘ ၀ ၌စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုရှာဖွေရန်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သည်။ နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှောင်ရှားခြင်း။ ထို့အပြင် IPD နှင့်ပတ်သက်သောသဘောထားများသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းမပြုမီနှင့်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်သော၊ အင်တာနက် - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကြောင့် IPD နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုရှာဖွေခြင်းလမ်းကြောင်းများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုအတွေ့အကြုံရှိအော်ဂဇင်၏ကျေနပ်မှုကိုအကဲဖြတ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်လေ့လာမှု၏ရလဒ်များအနေဖြင့် IPD သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန္ဒပြည့်ဝမှုကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဆိုးရွားသည့်စိတ်ခံစားမှုများကိုရှောင်ရှားရန်သို့မဟုတ်ကိုင်တွယ်ရန်တွန်းအားပေးခြင်းအပြင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများစားသုံးမှုနောက်တွင်စိတ်ဓာတ်ပြောင်းလဲခြင်းသည် IPD နှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟူသောယူဆချက်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟူသောယူဆချက်နှင့်ကိုက်ညီသည် (Cooper က et al ။ , 1999 နှင့် Laier နှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, 2014).
18) လိင်အင်တာနက် (ပြဿနာ) ကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်ခန့်မှန်းအကဲဆတ်သောပစ္စည်း: လိင်အကဲဆတ်သောပစ္စည်းဆီသို့စရိုက်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Motivation and Implicit ချဉ်းကပ်လိုတဲ့သဘောထားကို၏အခန်းက္ပ (Stark et al ။, 2017) - [ သာ. ကြီးမြတ် cue reactivity ကို / ာင်း / မတရားသော] - ကောက်နှုတ်ချက်:
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းဆီသို့ရိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်သွယ်ဝိုက်ချဉ်းကပ်လိုတဲ့သဘောထားကိုပြဿနာ SEM အသုံးပြုမှုနှင့် SEM စောင့်ကြည့်နေခဲ့ရသည်နေ့စဉ်အချိန်ခန့်မှန်းနေကြသည်ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေး။ တစ်ဦးအမူအကျင့်စမ်းသပ်မှုတှငျကြှနျုပျတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းဆီသို့သွယ်ဝိုက်ချဉ်းကပ်လိုတဲ့သဘောထားကိုတိုင်းတာဘို့ချဉ်းကပ်-ရှောင်ရှား Task ကို (AAT) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ SEM စောင့်ကြည့်သုံးစွဲ SEM နှင့်နေ့စဉ်အချိန်ဆီသို့သွယ်ဝိုက်ချဉ်းကပ်မှုသဘောထားကိုအကြားတစ်ဦးကအပြုသဘောဆက်စပ်မှုအာရုံကိုသက်ရောက်မှုအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့စေခြင်းငှါ: မြင့်သွယ်ဝိုက်ချဉ်းကပ်မှုသဘောထားကို SEM ဆီသို့ဦးတည်ထားတဲ့အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်ပါသည်။ ဒီအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးကဘာသာရပ်ပိုပြီး SEM က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်သုံးစွဲအချိန်မြင့်မားတဲ့ပမာဏသာရှိရရှိလာတဲ့အင်တာနက်ပေါ်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုဆွဲဆောင်ခံရပေလိမ့်မည်။
19) အင်တာနက်ညစ်ညမ်း-အသုံးပြုမှုရောဂါဆီသို့သဘောထားတွေ: ညစ်ညမ်းလှုံ့ဆော်မှုဖို့အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်. အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်ကွာခြားချက်များ (2018) - [တိုးမြှင်မတရားသော, cue reactivity ကို / ာင်း သာ. ကြီးမြတ်] ။ ကောက်နှုတ်ချက်
အများအပြားကရေးသားသူစွဲလမ်းရောဂါအဖြစ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း-အသုံးပြုမှုရောဂါ (IPD) စဉ်းစားပါ။ ပြင်းထန်စွာ substance- နှင့် Non-ပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်အတွက်ကိုလေ့လာခဲ့ပြီးသောယန္တရားများတစ်ခုမှာစွဲ-related တွေကိုဆီသို့တစ်ဦးတိုးမြှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုကတော့ cue သူ့ဟာသူ၏အခြေအနေမက်လုံးပေး salience ကြောင့်စွဲ-related တွေကိုအားဖြင့်ထိခိုက်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့အမြင်၏သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များအဖြစ်ဖော်ပြနေကြသည်။ ဒါဟာ IPD လက္ခဏာတွေသွယ်ဝိုက်သိမြင်မှုအဖြစ် cue-reactivity ကိုနှင့်တဏှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကျရောက်နေတဲ့တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ပေါ်ထွန်းနှင့်စွဲလမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းတိုးမြှင့်သောငါ-PACE မော်ဒယ်အတွက်ယူဆနေသည်။ IPD ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု၏အခန်းကဏ္ဍကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ကျနော်တို့ 174 ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းပါဝင်သူတစ်နမူနာစုံစမ်းစစ်ဆေး။ အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုသင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းသို့မဟုတ်ကြားနေရုပ်ပုံများပြီးနောက်ပေါ်လာသောမြှားအပေါ်တုံ့ပြန်ခဲ့သည့်အတွက် Visual စုံစမ်းစစ်ဆေး Task ကိုအတူတိုင်းတာခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအားဖြင့်သွေးဆောင်သူတို့ရဲ့လိင်စိတ်နိုးထညွှန်ပြခဲ့ကြရသည်။ ထို့အပွငျ IPD ဆီသို့သဘောထားတွေကိုရေတို-Internetsex စွဲစမ်းသပ်ခြင်းကိုအသုံးပြုပြီးတိုင်းတာခဲ့ကြသည်။ ဤလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း cue-reactivity ကိုနှင့်တဏှာအဘို့အညွှန်းကိန်းကကမကထပြုခဲ့ IPD ၏အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့်လက္ခဏာပြင်းထန်မှုအကြားဆက်ဆံရေးပြသခဲ့သည်။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးယေဘုယျအားဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြောင့်တုံ့ပြန်မှုကာလ၌ကွာခြားနေစဉ်, အလယ်အလတ်ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအာရုံကိုဘက်လိုက်မှု IPD လက္ခဏာတွေများ၏အခြေအနေတွင်လိင်၏လွတ်လပ်စွာဖြစ်ပေါ်ကြောင်းထင်ရှား။ ရလဒ်စွဲ-related တွေကို၏မက်လုံးပေး salience ပတ်သက်. ကျနော်-PACE မော်ဒယ်၏သီအိုရီယူဆချက်ကိုထောကျပံ့ခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်အတွက် cue-reactivity ကိုနှင့်တဏှာ addressing လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်ကြသည်။
20) အင်တာနက်ညစ်ညမ်း-အသုံးပြုမှုရောဂါဆီသို့စိတ်သဘောထားနှင့်အတူယောက်ျားအတွက်ရိုနှင့်ပြည်နယ် Impulse (Antons & Brand, 2018) - [တိုးမြှင့်တပ်မက်ခြင်း, သာ။ ကြီးမြတ်ပြည်နယ် & ရို Impuls] ။ ကောက်နုတ်ချက်များ
ရလဒ်များရို Impulse အင်တာနက်ညစ်ညမ်း-အသုံးပြုမှုရောဂါ (IPD) ကိုပိုမိုမြင့်မားလက္ခဏာပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့ဖော်ပြသည်။ အထူးသဖြင့်သူတို့ရပ်တန့်-signal ကိုတာဝန်များ၏ညစ်ညမ်းအခြေအနေပိုမိုမြင့်မားရို Impulse နှင့်ပြည်နယ် Impulse နှင့်အတူယောက်ျားအဖြစ်မြင့်မားသောတဏှာတုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူသူတို့အား IPD ၏ပြင်းထန်သောရောဂါလက္ခဏာများပြသသည်။
ရလဒ်ရိုနှင့်ပြည်နယ် Impulse နှစ်ဦးစလုံး IPD ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါလှတဲ့အကဖော်ပြသည်။ ၏ Dual-ဖြစ်စဉ်ကိုမော်ဒယ်များနှင့်အတူအညီ စှဲမွဲမှု, ရလဒ်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါအရာထကြွလွယ်သောနှင့်ရောင်ပြန်စနစ်များအကြားတစ်ဦးမညီမမျှ၏ညွှန်ပြပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်အပျက်သဘောအကျိုးဆက်များကြုံနေရဆိုသော်ငြားအင်တာနက်ကို-ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်၏ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။
21) ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲလမ်းစေခြင်းသို့မဟုတ်မဖြစ်မနေအသုံးပြုခြင်းတို့ကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများပြonနာများအတွက်သီအိုရီယူဆချက်များ -“ အခြေအနေ” နှစ်ခုသည်သီအိုရီအရအကြံပြုထားသည့်အတိုင်းကွဲပြားပါသလား။ (2018) Matthias Brand, Stephanie Antons, Elisa Wegmann, Marc N. Potenza ကပြုလုပ်သည်. ကောက်နှုတ်ချက်:
22) Impulse ၏ရှုထောငျ့နှင့်ဆက်စပ်ရှုထောင့်ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏အပန်းဖြေခြင်းနှင့်စည်းကမ်းတအသုံးပြုမှုအကြားခွဲခြား (Stephanie et al ။ , 2019) - [တိုးမြှင်မတရားသော, သာ. ကြီးမြတ်လေ့, (hypofrontality) ဝနှောင့်နှေး] ။ ကောက်နှုတ်ချက်:
သောကြောင့်ယင်း၏အဓိကအားကြိုးသဘောသဘာဝ, အင်တာနက်ညစ်ညမ်း (IP) စွဲလမ်းအပြုအမူတွေများအတွက်တင်ကူးပြဋ္ဌာန်းပစ်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ Impulse-related Construction စွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုမြှင့်တင်ရေးအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ရဲ့ IP, အိုင်ပီနှင့် ပတ်သက်. သဘောထားကိုဆီသို့စွဲလမ်းလျက်, ရံဖန်ရံခါ-အပန်းဖြေအပန်းဖြေ-မကြာခဏနှင့်စည်းကမ်းတ IP ကိုအသုံးပြုမှုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်စတိုင်များကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း, (ရို Impulse, နှောင့်နှေးလျှော့နှင့်သိမြင်မှုစတိုင်လ်) ထကြွလွယ်သောသဘောထားတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ အပန်းဖြေ-ရံဖန်ရံခါသုံးစွဲခြင်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ၏အုပ်စုများ (n = 333), အပန်းဖြေ - မကြာခဏအသုံးပြုမှု (n = 394) နှင့်စည်းမျဉ်းများအသုံးပြုမှု (n အိုင်ပီ၏ = 225) စိစစ်တူရိယာအားဖြင့်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။
စည်းကမ်းတအသုံးပြုမှုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီလျှော့နှောင့်နှေး, တဏှာ, အာရုံစူးစိုက်မှုကို Impulse များအတွက်အမြင့်ဆုံးရမှတ်ပြပြီး, အလုပ်မဖြစ်ဖြေရှင်းနှင့် functional ဖြစ်စေဖြေရှင်းခြင်းနှင့်အခြားသောကောင်းကျိုးတို့အတွက်လိုအပ်များအတွက်နိမ့်ဆုံးရမှတ်။ ရလဒ်တချို့ Impulse ၏ရှုထောငျ့နှင့်ထိုကဲ့သို့သောတဏှာနှင့်တစ်ဦးထက်ပိုအနုတ်လက္ခဏာသဘောထားကိုအဖြစ်ဆက်စပ်အချက်များကိုစည်းကမ်းတ IP ကိုအသုံးပြုသူများအတွက်တိကျတဲ့ဖြစ်ကြောင်း။ ညွှန်ပြ ရလဒ်ကိုလည်းသီးခြားအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မမှန်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေအပေါ်မော်ဒယ်များနှင့်အတူတသမတ်တည်းရှိပါတယ် ... ။ ထို့ပြင်စည်းကမ်းတ IP ကိုအသုံးပြုမှုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အပန်းဖြေ-မကြာခဏအသုံးပြုသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက IP ဆီသို့တစ်ဦးထက်ပိုအနုတ်လက္ခဏာသဘောထားကိုရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤရလဒ်ကိုစည်းကမ်းတ IP ကိုအသုံးပြုမှုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအမြင့်မားလှုံ့ဆျောမှုရှိသည်အကြံပြုဒါမှမဟုတ်သူတို့ပြီးသားသူတို့ရဲ့ IP ကိုအသုံးပြုမှုပုံစံချိတ်ဆက်အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များကြုံတွေ့ကြဖြစ်ကောင်းဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့က, IP ကိုအသုံးပြုမှုဆီသို့အပျက်သဘောဆောင်သောသဘောထားကတီထွင်ခဲ့ကြပေမည်ဖြစ်သော်လည်း IP ကိုသုံးစွဲဖို့တိုက်တွန်းပေလိမ့်မည်။ ဤ (စွဲလမ်း၏မက်လုံးပေး-sensitive သီအိုရီနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်Berridge & ရော်ဘင်ဆင်, 2016), အရာစွဲနေစဉ်အတွင်းလိုသောမှ like နှိပ်နေပြောင်းကုန်ပြီအဆိုတင်သွင်း။
တစ်ဦးကထပ်မံစိတ်ဝင်စားဖို့ရလဒ် session တစ်ခုနှုန်းနဲ့မိနစ် Post-hoc စမ်းသပ်မှုကြာချိန်များအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစား, အပန်းဖြေ-မကြာခဏအသုံးပြုသူများနှင့်စည်းကမ်းတအသုံးပြုသူများကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ, တစ်ပတ်ကိုကြိမ်နှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့သညျ။ ဖြစ်ပါသည် ဤသည်ကိုစည်းကမ်းတ IP ကိုအသုံးပြုမှုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအထူးသဖြင့်တစ်ဦး session တစ်ခုအတွင်းမှာ IP ကိုစောင့်ကြည့်ရပ်တန့်ဖို့အခက်အခဲရှိသည်သို့မဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အတွက်သည်းခံစိတ်တစ်ပုံစံတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါလိမ့်မယ်သောတပ်မက်လိုချင်သောဆုလာဘ်, အောင်မြင်ရန်ကြာကြာအချိန်မလိုအပ်ကြောင်းညွှန်ပြပါလိမ့်မယ်။ ဤ (ညစ်ညမ်း Bing compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့အတူကုသမှု-ရှာကြံယောက်ျားအတွက်အများဆုံးဝိသေသအပြုအမူတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားသောဒိုင်ယာရီအကဲဖြတ်ခြင်းမှရလဒ်နှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်Wordecha et al ။ , 2018).
23) စည်းကမ်းတအင်တာနက်ညစ်ညမ်းကျွန်တော်တို့ကို (2019) ၏ကွဲပြားဒီဂရီနှင့်အတူလိင်ကွဲအထီးအတွက်တဏှာနှင့် functional ဖြစ်စေကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းစတိုင်များ၏ interaction
စည်းကမ်းတအင်တာနက်ညစ်ညမ်း (IP) ကိုအသုံးပြုခြင်း IP ကိုအသုံးပြုမှုကိုကျော်လျော့နည်းသွားထိန်းချုပ်မှုနှင့်အပျက်သဘောအကျိုးဆက်များဆိုသော်ငြားဆက်လက်သုံးစွဲခြင်းအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ တဏှာ IP ကိုအသုံးပြုမှုပမာဏအပေါ်ကိုစည်းကမ်းတ IP ကိုအသုံးပြုလက္ခဏာပြင်းထန်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု mediates ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများရှိပါသည်။ functional ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းစတိုင်များတစ်ဦးချင်းစီတဏှာနှင့်အတူပိုကောင်းဖောက်ကားခြင်းဖြင့်၎င်းတို့၏အပြုအမူအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုပြန်လည်ဖို့ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။ ဤ IP အသုံးပြုမှုအပေါ်တဏှာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစည်းကမ်းတ IP ကိုအသုံးပြုမှုအမျိုးမျိုးဒီဂရီနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းစတိုင်များအားဖြင့်တည်းဖြတ်နေသည်ရှိမရှိမေးခွန်းပေါ်ပေါက်။
ယေဘုယျအား 1498 လိင်ကွဲ, အထီး IP ကိုအသုံးပြုသူများကဒီအွန်လိုင်းစစ်တမ်းများတွင်ပါဝင်ခဲ့။ သင်တန်းသားများကိုသူတို့၏ IP ကိုအသုံးပြုမှုပမာဏ, စည်းကမ်းတ IP ကိုအသုံးပြုလက္ခဏာပြင်းထန်မှု, အလုပ်လုပ်တဲ့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းစတိုင်များနှင့် IP ကိုဦးတည်သူတို့၏တဏှာညွှန်ပြ။
တစ်ဦးကတည်းဖြတ်ဖျန်ဖြေလိင်ကွဲအထီးအတွက်စည်းကမ်းတ IP ကိုအသုံးပြုကြောင်းလက္ခဏာပြင်းထန်မှုအပြုသဘော IP ကိုအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောခဲ့သည်ဖော်ပြခဲ့တယ်။ ဒီသက်ရောက်မှုကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတဏှာကကမကထပြုခဲ့ခဲ့ပါတယ်နှင့် IP အသုံးပြုမှုအပေါ်တဏှာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအလုပ်လုပ်တဲ့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းစတိုင်များအားဖြင့်တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
24) သီအိုရီ, ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ညစ်ညမ်း-အသုံးပြုမှုရောဂါ (2019) ၏ကုသမှု
နိဒါန္း ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအပါအဝင် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရောဂါအဖြစ် ICD-11 တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ ဥပမာအားထပ်တလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို person's အသက်တာ၏ဗဟိုအာရုံဖြစ်လာဒီရောဂါများအတွက်အဖြေရှာတဲ့စံ, သို့သော်, သိသိသာသာထပ်တလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုလျှော့ချရန်နှင့်ရှိနေသော်လည်းထပ်တလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုဆက်လက်ရန်မအောင်မြင်အားထုတ်မှုစွဲလမ်းအပြုအမူတွေကြောင့်ပုံမမှန်များအတွက်စံရန်အလွန်ဆင်တူ အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များ (WHO က, 2019) ကြုံနေရ။ အတော်များများကသုတေသီများနှင့် Clinician လည်းပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦးအမူအကျင့်စွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ငြင်းခုန်။
ရလဒ်များ လျှော့ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့ပေါင်းစပ် Cue-reactivity ကိုနှင့်တဏှာ, သွယ်ဝိုက်သိမြင်မှု (ဥပမာချဉ်းကပ်လိုတဲ့သဘောထားကို) နှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ဆန္ဒပြည့်နှင့်လျော်ကြေးကြုံနေရညစ်ညမ်း-အသုံးပြုမှုကိုရောဂါလက္ခဏာတွေနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်သရုပ်ပြပါပြီ။ Neuroscientific လေ့လာမှုများပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် ventral striatum နှင့်နံရံပစ်ကစားနည်း-striatal ကွင်း၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများအပါအဝင်စွဲ-related ဦးနှောက်ဆားကစ်၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု, အတည်ပြုပါ။ ဖြစ်ရပ်မှန်အစီရင်ခံစာများနှင့်အထောက်အထား-of concept ကိုလေ့လာမှုများညစ်ညမ်း-အသုံးပြုမှုရောဂါနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကိုကုသဘို့, ဥပမာ, opioid ရန် naltrexone pharmacological ကြားဝင်များ၏ထိရောက်မှုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ randomized ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေ pharmacological ကြားဝင်၏အလားအလာရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများပြသရန်လိုအပ်နေပါသည်။ ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းများ၏ထိရောက်မှုအပေါ်စနစ်တကျလေ့လာမှုများပျောက်ဆုံးနေဆဲပေမယ့်အနာဂတ်သုတေသနနှင့်အလေ့အကျင့်များအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောခေါင်းစဉ်နေကြသည်။
ကောက်ချက် သီအိုရီထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်ပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားစွဲလမ်းမမှန်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် neurobiological ယန္တရားများညစ်ညမ်း-အသုံးပြုမှုရောဂါအတွက်လည်းတရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အလားအလာဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမဟာဗျူဟာ addressing ကိုစနစ်တကျလေ့လာမှုများညစ်ညမ်း-အသုံးပြုမှုရောဂါ၏သက်သေအထောက်အထားများ-based ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကုသမှုများအတွက်ဒေတာပေးအနာဂတ်သုတေသနများအတွက်အဓိကစိန်ခေါ်မှုများ၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏။